Waa maxay waqtiga ugu fiican ee jimicsiga | Niman qurux badan
Alicia tomero | | Ku habboon, Fitness
Dad badan ayaa la yaaban goorta ay tahay waqtiga ugu fiican ee jimicsiga. Dhab ahaantii, waa xaqiiqo aynaan garanayn, laakiin aragti ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay waxa ugu horreeya ee subaxda marka ugu badan ee kalooriyada la gubo.
Isboortiga iyo wakhtiga lagu celceliyo waxay soo baxdaa in ay noqoto dhaqan dhadhan kasta. Haddii ku celcelinta ay u malaynayso in xaqiiqo la dhimayo miisaanka, hubaal waxaad rabtaa inaad ogaato waxa ay tahay daqiiqadda ugu fiican ee maalinta in lagu dhaqmo. Sida ay qabaan khubarada qaar waxaa jira aragtiyo badan oo dhamaantood waa in dib loo eego.
1 Waqtiga ugu fiican ee jimicsiga
1.1 Samee isboorti subaxdii
1.2 Samee ciyaaraha habeenkii
1.3 Saacadadee ayaan dooranaa?
2 Waa muhiim in si joogta ah loo sameeyo ciyaaraha
Waqtiga ugu fiican ee jimicsiga
Waxaa jira aragtiyo kala duwan oo taageeraya goorta ugu fiican ee ciyaaraha la ciyaaro. Fikradda qaar badan oo iyaga ka mid ah, waa inaad raacdo habka caadiga ah oo aad sameyso markaad u maleyneyso in jidhkaagu uu aad u aqbalayo samaynta.
Samee isboorti subaxdii
Had iyo jeer waa lala xidhiidhin jiray waxa ugu horreeya subaxdii waayo, maalintaa ku bilow firfircooni oo dhan oo aad awood u yeelatid inaad gubto dhammaan kaydadkaas aad ka tagtay. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato aragtidan, waxaa jira waxyaabo badan oo aasaasi ah oo taageeraya:
Bilaabida maalinta waxay jidhkaaga ka dhigaysaa mid firfircoon laxanka wareega, waxaa jira tamar badan taasina waxay dhiirigelisaa in hawsha lagu qabto dadaal yar. Sidoo kale, haddii lagu sameeyo calool madhan waxa aad u fiicnaan doonta in la dhimo.
Khubarada qaar ayaa horeba u saadaaliyay in wakhtiga ugu fiican uu ahaan doono 7 subaxnimo, mar haddii aad shaqeysid saacada noolaha taasna waxay la macno tahay in aad gubaneyso iyo in aad firfircoonaato maalintii. Haddii, liddi ku ah, la sameeyo dhamaadka maalinta, faa'iidooyinkani waa la dhimi doonaa.
Ma tahay inaad ku qabatid ciyaaraha calool madhan? Runtii waa arrin shakhsi ah, mar haddii ilaha qaar ay ku andacoonayaan in soonku sabab u yahay in dhammaan kaydadka la gubo. Laakiin ma aha xog la soo gabagabeynayo, maadaama ay jiraan jirro u baahan inay la toosaan wax caloosha ku jira oo xitaa ciyaartoyda heerka sare ah aysan awoodin.
Xitaa subaxdii waxay leeyihiin faa'iidooyin kale oo badan. Dadka waxay maalinta ku bilaabaan jidh aad u firfircoon taasina waxay kicisaa dheef-shiid kiimikaad. Marka la barbar dhigo ciyaaraha wakhtigan hormoonnada farxadda ayaa soo daaya (endorphins, serotonin iyo dopamine) taasina waxay keenaysaa in ay firfircoonaadaan maalintii oo dhan. Waxay xanbaarsan yihiin faa'iidada iyo xakamaynta diiqada waxayna kaa dhigayaan inaad dareento kacsanaan badan.
Haddaynu ku dhiirranno inaynu goor hore kacno xataa waxaan hagaajin doonaa wareegga hurdada waxayna naga caawin doontaa inaan si fiican u seexano habeenkii. Dad badan, waxay ka dhigtaa bilawga maalinta habkani inay kordhiso tamarta, waxay kicisaa dhammaan dareemayaasha waxayna ka caawisaa inay si sahlan u-fiirsadaan.
Samee ciyaaraha habeenkii
Aragtiyo kale ayaa taageera ciyaaraha habeenkii. Xitaa waxay taageersan yihiin inay fiican tahay in wakhtigan lagu dhaqmo oo aan subaxdii la joogin. Saynis yahanada Machadka Weizmann ee Sayniska (Israel) ayaa taageeray xogta jimicsiga waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido badan, tan iyo wakhtigan jirku waxay isticmaashaa ogsijiinta aad uga yar. Waxay xitaa taageeraan aragtidooda iyagoo muujinaya inay tahay marka aan helno tamar iyo xoog badan, oo sidaas darteed wax badan oo iska caabin ah.
Jidhku waxa uu leeyahay heer kul jidh oo aad u sarreeya aad ayayna u fududahay in la kululeeyo marka aad jimicsi samaynayso. Sidan, laxan tabobar oo wanaagsan ayaa lagu gaaraa. qaadashada kaloriin badan oo dheeraad ah. Ragga sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda ugu weyn, tan iyo wakhtigan waxay leeyihiin heerkooda ugu sarreeya ee testosterone sidaas darteedna waxay leeyihiin awood weyn.
Saacadadee ayaan dooranaa?
Ciyaartoyda badan iyo khubarada jirdhiska ayaa ku heshiiyey inay doortaan midka ugu habboon jadwal wanaagsan iyo xitaa marka jirku u baahan yahay. Ma samayn kartid jimicsi subaxdii haddii jidhkaaga diyaar uma aha in uu sameeyo, ama marka aadan dareensaneyn. Haddii aan si cagajiid ah u sameyno, heerka xoojinta aad ayuu u hooseeyaa sidaas darteed si fiican uma shaqeyn doono. Waxaa jira dad xitaa sugo inay sameeyaan fiidkii oo jirkoodu aad u daalan yahay. Way fiicantahay in la sameeyo marka jidhkaagu uu ka tamar badan yahay oo uu wax soo saar badan yahay.
Waa muhiim in si joogta ah loo sameeyo ciyaaraha
Uma baahnid inaad ku dhegganaato xogta markaad u malaynayso inay fiican tahay inaad samayso subaxdii ama habeenkii. Khubaradu waxay ku talinayaan in la sameeyo marka 'jidhka iyo maskaxda' ay u baahdaan oo aad xorowdo. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo iyada oo aan la tixgelin jadwalka iyo xitaa si joogto ah u samee si jirku ula qabsado caadadaas. Tababar toddobaadle ah iyo cunto wanaagsan ayaa ku filnaan doona si loo gaaro natiijo wanaagsan.
Haddii fikraddu tahay jimicsi si loo hagaajiyo caafimaadka ama muuqaalka jirka, waxaa fiican inaad xoogga saarto inaad sameyso marka jirku u baahan yahay. Dad badan ayaa sameeya marka noloshooda shaqada ama baahidooda ha doortaan wakhti ay ku qabtaan In kasta oo wakhtigu yahay mawduuc, habka ugu fiican ayaa ah in la sameeyo marka baahiyaha jidhkaagu u oggolaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waa maxay wakhtiga ugu fiican ee jimicsiga